Staff – Page 13 – Daily Som
Home»Entries posted by Staff (Page 13)
Dowlada Soomaaliya oo la filayo in ay saacadaha Soo Socdo war cad ka soo saarto Xiisada Balad Xaawo
By Staff on March 25, 2018 News
Dowlada Soomaaliya ayaa la filayaa in saacadaha Soo socda ay war ka soo saarto Xiisada ka taagan Magaalada Balad Xaawo ee Gobalaka Gedo, taas oo ay gar wadeen k atahay Dolwda Kenya oo la sheegay in ay dhul boob baahsan ka wado Xadka. Warar ka soo baxaya Villa Somaliya ayaa sheegaya uu socodo kulamo isdaba […]
War deg deg Gaari waxyabaha Qarxa laga soo buuxshay oo ku qarxay wado qarda Jeex ah
Waxaa goordhaw qarax ka dhacay Duleedka magaalada Muqdisho gaari wax yaabaha qarxa laga soo buushay waxa uuna ku qarxay Gudaha Xaafada wado ku taal halkaas oo udhaw Kontrool ay lee yihiin Ciidanka Dolwda. warar aan halkaas ka haelayno ayaa sheegaya in qaraxa uu ka dhacay wado qarda jeex ah oo ku taala Xafada Siinka Dheer, […]
Mxakamada Ciidamada qlabka sida oo Xukun ku riday Rag shabaabka qaraxyada ufarsamayn jiray
Xuno ka tirsan alshabaab ayaa manata waxaa maanta xukuntay Maxkamada Ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya waxaana qoorta galiyo Xabsiyo wakhti dhaadheer. Xubnaha ka tirsan alshabaab ee maanta xukunka lagu riday ayaa waxaa la soo qabtay Deegaanka Ceelasha biyaha ee duleedka Muqdisho, waxaana lagu soo qabtay guri halkaas ku yaala iyag oo diyaarinayaqaraxyo ay xiligaas ku […]
Naanulka Goobalka Gedo oo sheegay in ay Diyaariyeen Ciidanka Difaaca Balad Xaawo
Maamulka Gobalka Gedo ayaa sheegay in ay Dowlada Kenya kala Hortagi doonaan Dagaal Hadii ay joojin waydo Xad gudubka ay ka wado Xadka Gobalka Gedo la wadaago Dhulka NFD ee Kenya Maamusho. Ciidamada Kenya ayaa bur burin ka wada Guryo ku yaala Degmada Balad Xaawo oo ka trirsan Gobalka gedo waxaana Shalay halkaas lka dhacay […]
Shan xidig oo Badal unoqon kara Pholip Coutinho
By Staff on March 24, 2018 SPORTS
Kooxda Liverpool ee ka ciyaarta horyaalka Ingriiska ayaa Baadi goobaysa Xidigii ay ku badali lahaydciyaariyahkii dhawaan ka tagay Kooxdaas ee Phlip Coutinho oo ku biiray Kooxda BVarcelona ee dalka Spain. Taraha kooxda Reds ayaa doonaya 5 xidig oo uu is leeyahay waxa ay ku wanaagsan yihii kooxda kuwaas oo badal unoqon doona xidigii ka hayaama […]
Marcus Rashford oo looga gacan haatinayo Kooxda Real Madrid
Kooxda ku bada Cagta real Madrid ayaa doonaysa Gooldhaliyaha Kooxda Manchester United Marcus Rashford sida ay ku soo warmayso warbaahinta Sapain. Xidiga da’da yar ee United oo haatan wakhti wanaagsan ku qaadanaya Kooxdiisa ayaa ayaa la soo sheegaya in ay aad udoonayso kooxda manchester ee ku ciyaarta garoonka Masraxa Riyada. sida uu baahiyaya wargaysa Spots […]
Bale oo ku sii jeeda Manchester United iyo Caqab durba soo shaac baxday
Wariryahan Kooxda Real Madrid iyo xilka Wales ayaa la sheegaya in uu ka sii socda koorada asiga oo ku biiraya Kooxda Manchester United ee Dalka England. wargayska Daily mail ayaa sheegaya in xida uga ciyaara Real Mardir garabka in uu doonayo in uu kooxda, 28 jirkaan ayaana ku faraxsanayn sii joogistaSpain iyo kooxdiisa waxaana loo […]
Xidiga ugu Goolasha Badan Hal xili ciyaareed Kooxda Reds oo doonaya in Record kiisa uu jabiyo Maxamed Saalax
Ciyaariyahankii hore ee kooxda liverpool lan rush oo ah ninka ugu goolasha badan hal xili ciyaareed ayaa sheegay in uu doonayo in uu jabiyo Xidiga reer masar Maxamed Saalax in uu jabiyo Rikoorkiisa Goolasha, isla markaana uu aad ugu farxi lahaa. Halyaygii hore ee Reds ayaa horay udhaliyay Goolal gaaraya wadarta Guud 47 Gool halka […]
Ruushka oo sheegay in Maraykanka iyo Ingriiska ay bur burinayaan Xiriirka so wanaagsanaanaya Yurub iyo Ruushka
By Staff on March 24, 2018 WORLD
owlada uu hogaamiyo Madaxwaynaha Mayalka ag ee Dalka Ruushka Valdamir Putin ay iyo Ururka Midowlga yurub uu sii xoogaysanayo Khilaafka Xoogan ee soo kala dhex galay. Ruushka ayaana sheegay in Midowlga yurub ku sheegtay in ay wadaan daandaansi ka dhan ah Ruushka taas oo uu ku eedeeyay ruushku in ay gadaal ka riixayaan Maraykanka iyo […]
Hogaamiyayaal ka tirsan Gobalka Gooni Goosadka ah ee Kataloniya oo Xabsiga la dhigay
Taageerayaal fara badan oo ka tirsan xisbiyada gooni ugoosadka ah ee gobolka Katalooniya ayaa waxa ay waxa ay isku dhaceen CXiidamada Booliska Gobaalkaas ka dib markii xabsiga loo taxaabay Hogaamiya yaal ka tirsan Maamulka Gobalka Katalooniya kuwaas oo ay xirta Dowlada. Magaalada Caasimada u ah Gobalkaas ee barcelona ayaa waxaa ku dhawaawacmay ku dhawaad 30 […]